सिरानीमा यस्ता चीज राखेर सुत्दा हुन्छ चमत्कारिक लाभ प्राप्त ! थाहा पाउनुहाेस् - Nawalpur Dainik
सिरानीमा यस्ता चीज राखेर सुत्दा हुन्छ चमत्कारिक लाभ प्राप्त ! थाहा पाउनुहाेस्
August 17, 2021 by Nawalpur Dainik
पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।दुर्गा सप्तसती पाठ-दुर्गा सप्तसती पाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा विहानमा उठ्दा ताजापन अनुभव समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।
यो पनि पढौ : साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् पैतलामा यस्तो चिह्न भएका व्यक्तिहरु
ज्याेतिष शास्त्र अनुसार हात हेरेर भविश्य बताउने विषय त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर समुन्द्र शास्त्रले शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यहाँ रहेका रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव बताउन सकिने बताउँछ ।
हातका मात्र होइन खुट्टाका रेखा पनि मानिसको स्वभाव र भाग्य विश्लेषणका लागि महत्वपूर्ण हुने यो शास्त्रमा उल्लेख छ । यहाँ समुन्द्र शास्त्र अनुसार खुट्टाका पैतलामा हुने चिन्हको अर्थबारे चर्चा गरिएको छ । समुन्द्र शास्त्र अनुसार खुट्टाको कान्छी औंलाको फेंदमा माथिमा माथितिर गएको रेखा छ भने यस्ता ब्यक्ति भोगी र विलाशी हुन्छन् । यस्ता व्यक्ति समाजमा प्रतिष्ठित पनि हुन्छन् । यिनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् र धनी पनि ।
जसको पैतालामा बुढी औंलाको फेंदमा स्वस्तिक चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति महामानव हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई विश्वले चिन्छ । जसको पैतालामा मध्य भागमा अर्धचन्द्राकर रेखा छ त्यस्ता धनी भए पनि धनको मतलव नगर्ने हुन्छन् । पैतालामा अंग्रेजी अक्षर ‘टी’ जस्तो आकृति छ भने त्यस्ता व्यक्ति भाग्यशाली हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिले व्यापारमा निक्कै सफलता पाउँछन् ।
Prevभदौ ०२ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
Nextभदौ ०३ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल